ဒါဗင်ချီကုတ်က မထွက်ခင်ကတည်းက နာမည်ကြီးနေတဲ့စာအုပ်၊ ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးပြီး ဇာတ်လမ်းလဲ အောင်မြင်သလို မူရင်းစာအုပ်လည်း သန်းချီပြီးရောင်းရတဲ့စာအုပ်။ အငြင်းပွားစရာတွေပါဝင်လို့ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ထုတ်ဝေ၊ရုံတင်ပြသခွင့်မရိှတဲ့စာအုပ်။၂၀၀၃ မှာ မူရင်းစာအုပ်ထွက်ရိှပြီး မြန်မာဘာသာပြန်ကို ၂၀၁ရမှာ ထုတ်ဝေတယ်။
ပြင်သစ်ပြည် လူ့စ်ပြတိုက်ရဲ့ ပြတိုက်မွူး ယက််စ်ဆိုနယဲ အသတ်ခံရတယ်။ ဆိုနယဲက မသေခင် ပြတိုက်ထဲမှာ သင်္ကေတကုတ်တွေ ချန်ထားခဲ့တယ်။ ကုတ်မှာပါဝင်တဲ့ နာမည်တစ်ခုနောက်ကို ရဲတွေလိုက်ကြတယ်။ ရောဘတ်လန်ဒင်၊ ဟားဗက်က သင်္ကေတပညာရှင် ပါမောက္ခ ၊ ဆိုနယဲနဲ့ ညစာစားဖို့ ချိန်းထားသူ၊ လူသတ်ကောင်အဖြစ် သံတယအဖြစ်နိုင်ဆုံးသူ။ လန်ဒင်ကို ပြင်သစ်ရဲတွေက သင်္ကေတပေါ်ဖို့ လူ့စ်ပြတိုက်ကိုခေါ်တယ်။ ဆိုနယဲရဲ့ ကိုယ်လုံးထီးအလောင်းက ကြမ်းပေါ်မှာ အဖွေးသား၊ ခြေနှစ်ဖက် လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ကားပြီး ၊ ဝမ်းဗိုက်မှာ ငါးထောင့်ကြယ်ပုံဖော်ထားတယ်။ငါးထောင့်ကြယ်က ခရစ်ယာန်ဘာသာ မတိုင်မီ ကိုးကွယ်မွုနဲ့ ဆက်စပ်နေတာ၊နတ်ဘုရားမသင်္ကေတ။ ဝမ်းဗိုက်မှာ သွေးစိုနေတဲ့ သေနတ်ဒါဏ်ရာ၊ လက်ညိုးမှာပေနေတဲ့ သွေးက ဒါဏ်ရာက သွေးကိုယူပြီး စာရေးခဲ့ပုံ၊ပြီးတော့တခြားလက်တစ်ဖက်ထဲ marker pen တစ်ချောင်းကို ဆုပ်လျက်။ လန်ဒန်အတွေးပေါက်ပြီး မူခင်းရဲသုံးအလင်းနက်နဲ့ အလောင်းကိုထိုးကြည့်တော့ ပါကေးပေါ်မှာဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့ စာ။
‌အပေါ်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေက ဖီဗိုနာချီ ကိန်းစဉ်၊၁၃ရာစု သချာင်္ပညာရှင် လီယိုနာဒို ဖီဗိုနာချီ တီထွင်ခဲ့တာ၊အဲ့ ကုတ်ကို ဖော်နိုင်သူက မဖိတ်ပဲ ရောက်လာတဲ့ ပြင်သစ် ဝှက်စာဖော် ဌာနကအမျိုးသမီး စုံထောက် ဆိုဖီနဲဖူ။ ဖီဖိုနာချီ ကိန်းရဲ့သဘောက ကိန်းတစ်ခုတိုင်းဟာ ရေှ့ကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလဒ်နဲ့ ညီမျှတယ်။ ဥပမာ ၁..၁...၂....၃....၅...၈....၁၃...၂၁. အဲ့ပုံစံမျိုး။
ဗိုနာချီ ကိန်းစဉ်မှာပါတဲ့ ဆက်လျက်ရိှသော ကိန်းစဉ်နှစ်ခုရဲ့ စားလဒ်ဟာ ၁.၆၁၈ ဆိုတဲ့ ဖီ ကိန်းဂဏန်း ကိုရစေတယ်။
‌အဲ့ကိန်းစဉ် ဟာ အနုပညာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိန်းဂဏန်း ဖီပဲ။နတ်တို့ရဲ့ အချိုးလို့လဲ ခေါ်တယ်။ပျားအုံမှာ ပျားထီးနဲ့ ပျားမအချိုး၊ခေါင်းကခြေဖျားထိနဲ့ ခါးကခြေဖျားထိအချိုး၊ပုခုံးမှ လက်ဖျားထိနဲ့ တံတောင်မှ လက်ဖျားထိ အချိုး၊နောက်ပြီး ငါးထောင့်ကြယ်မှာလဲ မျဉ်းပြတ်တွေရဲ့ အချိုးဟာ ဖီနဲ့ညီတယ်။အလိုအလျောက် နတ်တို့၏ အချိုးအတိုင်း ပိုင်းဖြတ်ကြလို့။
‌ဆိုနယဲ ဘာကြောင့်များ အဲ့ကုတ်ကိုထားခဲ့တာများလဲ။ ကိန်းဂဏန်း တွေရဲ့ အစီအစဉ် မကျမူက နောက်စာကြောင်းတွေပေါ်သွားပြီး သက်ရောက်စေတယ်။ နောက်စာကြောင်းနှစ်ခုကလဲ အတည်မဟုတ်၊ စာလုံးလွဲပုံစံမျိုး။
‌နောက်နှစ်ကြောင်းကို လန်ဒင်က ဖော်လိုက်နိုင်တယ်။ anagram အရေးမျိုးနဲ့ရေးထားတာ၊anagram ဆိုတာ စကားလုံးတစ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့ စာလုံးတွေကို နေရာလွဲပီးရေးထားတာမျိုး၊ဥပမာ car ကို arc လို့အရေးမျိုး၊
Leonardo da vinci လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ
‌Oh, Lame saint....
The Mona Lisa မိုနာလီစာ။
‌ဝှက်စာထဲ ပြင်သစ်ရဲတွေ ဖျောက်ထားတဲ့ စာတစ်ကြောင်းရိှသေး၊
‌Ps ရောဘတ်လန်ဒင် ကိုရှာ…”
‌ps ကဘာကိုညွန်းပြီး ရောဘတ်ကိုရော ဘာကြောင့်များ ရှာခိုင်းရတာလဲ၊ရဲတွေကရော ဘာကြောင့်ဒီစာကြောင်းကို ဖျောက်ထားရတာလဲ၊ ဆိုနယဲ နဲ့ ဆိုဖီဗူးနဲကရော ဘယ်လိုပတ်သက်မွုမျိုးလဲ ၊အဲ့လိုနဲ့ပဲ ကုတ်တွေ၊လျိုဝှက်ချက်တွေ၊တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖော်ရင်း ဇာတ်လမ်းအဆုံးထိ ခေါ်သွားပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံးညစာစားပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထင်ရှားတာတစ်ခုက ဟိုလီဂရေလ်း။ ဂရေးလ်က ယေရွုခရစ် နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာ သောက်ခဲ့သော၊နောက်ပိုင်းယေရွုကားစင်တင်ပြီးနောက် ကျလာသောသွေးကို ခံယူရာတွင်သုံးသောဖလား။ အဲ့အရာတွေရဲ့အနောက်မှာ မကုန်နိုင်တဲ့ လျိုဝှက်ချက်တွေက ထုနဲ့ထေး၊ဖလားက ဘာကိုကိုယ်စားပြုပြီး၊ ဘာကိုဝှက်ထားခဲ့တာလဲ စိတ်ဝင်စားစရာတွေက တပုံတပင်။
‌ နောက်ထပ် စွန့်စားခန်း၊ သမိုင်းအချက်အလက်တွေအပြင်၊ ခရစ်ယာန်အယူဝါဒတွေ ပါမနည်း ရောပြွန်းနေပါတယ်။ ဒါဗင်ချီရဲ့ Mona Lisa, The last supper, The virgin of the rock ပန်းချီ ကားတွေအကြောင်းနဲ့ ကုတ်တွေ ၊နယူတန်ရဲ့ ပန်းသီးပါမကျန် ကုတ်ထားပြီးဝှက်ထားခဲ့တဲ့ ဒါဗင်ချီကုတ်ဟာ ဖတ်လို့လဲ မငြီးငွေ့တာမို့ စွန့်စားခန်း၊လျိုဝှက်ချက်၊အမိုင်း၊ဘာသာရေးတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စား သူကတော့ ဖတ်ပျော်ပါလိမ့်မယ်။